Izindaba eTurkey zakamuva | RayHaber | raillynews
IkhayaLolu Hlaka Lomthetho Odingidwayoizindaba eTurkey yakamuva
10 / 05 / 2020 Lolu Hlaka Lomthetho Odingidwayo
Noma imiphi imicimbi yangempela noma ethandekayo imenyezelwa ngokweqiniso izindabakwenziwa ngokuhlola okungakhethi. Ulimi olusetshenzisiwe lucacile futhi lwenzelwe ngendlela abantu abangayiqonda ngayo.
Izindaba uma i-intanethi ingakangeni ezimpilweni zethu; Kwalandelwa kusuka emaphephandabeni nasemisakazweni. Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, kwi-inthanethi haberxnumx Izingosi zezindaba ezisezingeni eliphakeme nezinobuchwepheshe ezifana nemibiko yezindaba futhi zishicilela imicimbi eminingi ethokozisayo futhi yamanje emhlabeni nasezweni lethu.
Ukwazi ngokushesha zonke izinhlobo zezihloko ngomzuzu wokugcina, i-ajenda, umhlaba, umnotho, ezemidlalo, umagazini kanye nobuchwepheshe bezempilo. https://www.haber365.com.tr/ Ungalandela isixhumanisi.
Turkey coronavirus Tracking Wena
I-coronavirus ingenye yezinkinga ezibaluleke kakhulu ezithinta hhayi izwe lethu kuphela kepha umhlaba wonke. I-Haber365, ebhekisisa leli gciwane, elihlasela umhlaba nezwe lethu, kusukela ekuqaleni futhi alilihli ku-ajenda yalo, kubika izindaba zokuthuthuka kwe-coronavirus ezweni lethu nasemhlabeni. Isayithi lezindaba, elihlanganisa izindaba ezisekuseni kakhulu kusuka kwizinyathelo ezithathwe ekulweni nezwe lethu ezweni lethu, inani leziguli libuye lishicilele izindaba ezifundisayo kwiwebhusayithi yalo, ngokufaka imisebenzi yodokotela bethu.
Ezindabeni ezilandela isibalo sabantu abashona kuma-coronavirus emhlabeni jikelele, futhi umemezela ukuthi yini amazwe akwenzayo ngokumelene naleli gciwane ezindabeni zabo. Ezindabeni, lapho uzothola ukuthi yimaphi amazwe anesisindo esikhulu esisekelweni lamazwe, izindaba zabantu abane-coronavirus emhlabeni wezepolitiki nemidlalo nazo zifakiwe. Phakathi kwezindaba ukuthi ulandela eduze ajenda yomhlaba mayelana ne-coronavirus; Iphinde yazise abantu ezweni lethu ngezindaba ngalokho okwenziwa amanye amazwe nge-coronavirus, ukuthi bathatha kanjani izinyathelo zokuvikela, nokuthi abantu bezwe bahlala kanjani.
Esikhathini indawo izindaba nethuba banikele a coronavirus, njengoba aid amazwe emhlabeni Turkey, okuyinto futhi iqhaza ezindabeni Haber365, ngohlelo izindaba inhloso kanye namaqiniso, umnotho, ezemidlalo nezindaba tabloid e kakhulu ngendlela umgomo unikeza indawo okuqukethwe izindaba uzoba ukulandela.
Ku-Country Agenda Radar
Ngaphandle kwezindaba ze-coronavirus, i-ajenda yezwe iqukethe izindaba zezepolitiki nezomnotho, nezindaba zezemidlalo. Indawo yezindaba, futhi elandelayo nentuthuko ezweni lethu emkhakheni wezempilo nezobuchwepheshe kahle, ikakhulukazi ngomzuzu wokugcina. izindaba yazisa abalandeli bayo mayelana nemicimbi. Isayithi lezindaba, eliveza izindaba ezisezingeni eliphakeme kakhulu ngevidiyo yalo negalari yezithombe, linikeza izindaba ezisekuseni kakhulu nezithokozisayo ngokulandela ngokuqondile.
Ngenkathi i-coronavirus isesigabeni se-ajenda yezwe, izindaba eziningi zigcina i-ajenda yethu emkhakheni wezepolitiki. Indawo yezindaba, lapho umncintiswano phakathi kwamaqembu ulandelwa usuku nosuku, ifaka nezindaba zokuthi kungenzeka kube nesikhathi esibekelwe sona ngesikhathi se-Eid al-Fitr.
Ngasikhathi sinye, izindaba zokuthi kufanele bavule nini abalungisa izinwele futhi abagwazeli okufanele bavale izindawo zabo zomsebenzi ngenxa ye-coronavirus zilandelwa ikakhulukazi ngabanikazi bendawo yokusebenza.
Indawo yezindaba ihlanganisa nezindaba zezemidlalo ezivela emhlabeni kanye nezwe lethu. Indawo yezindaba, ekhombisa ukusebenza ngokucophelela ngalokho okwenziwa yiqembu lomhlaba namaqembu ezwe lethu, ukuthi kudluliswa ini kule nqubo, okwenziwa abaphathi, onompempe, othisha kanye nabasubathi emidlalweni yezempilo. Idonsela ukunaka izindaba zayo.
Abathandi bezobuchwepheshe bangalandela kalula intuthuko emhlabeni nasezweni lethu kusayithi lezindaba. Abantu abakhombisa intshisekelo ethe xaxa kumageyimu we-inthanethi kulezi zinsuku ekhaya bayakwazi ukufinyelela izindaba mayelana nomdlalo we-Call of Duty, othinta umhlaba wonke, ngenkathi bekhombisa ukuthi balandela eduze intuthuko yakamuva yama-Smartphones asebeyingxenye yempilo ngezindaba zobuchwepheshe.
I-Haber365, evelele nezindaba zayo eziphethe ukushaya kwezwe nezwe, inikeze indawo yayo yezindaba; iyaqhubeka nezinsizakalo zayo zezindaba ezisezingeni eliphakeme nezindaba ezisezingeni eliphezulu ngezindaba zezimo zemigwaqo, isimo sezulu kanye namazinga okushintshana.
Logistics ingqalasizinda eTurkey alwanele
Trabzon Uzungöl Turkey kuyoba isikhathi eside ikhebula imoto
ski resort entsha eTurkey
ETurkey Kuhle Ski (Isithombe Igalari)
Isibhedlela i-Erdogan Examines Hospital Under Ukwakhiwa e-Ataturk Airport
Ungathikamezi kulesi sifo!
insindiso kuhlanganiswe ezokuthutha eTurkey
Ezintabeni umnotho eTurkey uzobe atholwe
2023 amatshe ezokuthutha eTurkey